I-FSF Ithi "Ayamukeleki Futhi Ayinabulungisa" futhi Izokhokhela Izindatshana Ezindabeni Nezomthetho | Kusuka kuLinux
I-FSF ithi "ayamukeleki futhi ayifaneleki" futhi izokhokhela izindatshana ezindabeni zezomthetho nezingqinamba
Okuhle | 28/07/2021 20:00 | Izaziso
Kungekudala sihlanganyela lapha kubhulogi izindaba ze «Copilot» okuyi i-AI ethembisa ukonga isikhathi ngokusiza ngokubhala ikhodi yomsebenzisi ngeziphakamiso zabo ezincike ezigidini zemigqa yekhodi yomphakathi abasebenzisi bayo abanikele esidlangalaleni kwi-GitHub, besebenzisa uhlelo lobunhloli bokuzenzela olubizwa ngeCodex oluvela enkampanini yocwaningo i-OpenAI.
Ngenkathi uCopilot eyisilondolozi sesikhathi esihle futhi iGitHub ichaza iCopilot njenge-AI elingana ne- "pair programming", lapho onjiniyela ababili basebenza ndawonye kukhompyutha eyodwa. Umqondo ngukuthi unjiniyela oyedwa angavela nemibono emisha noma abone izingqinamba okungenzeka ukuthi omunye unjiniyela uziphuthele, noma ngabe kudinga amahora amaningi okusebenza.
EkuzijwayezaNoma kunjalo, iCopilot ingaphezulu kwethuluzi lokusindisa isikhathi njengoba kunjalo ihlanganisa izinsizakusebenza okumele onjiniyela babheke kwenye indawo. Njengoba abasebenzisi befaka idatha kuCopilot, ithuluzi lisikisela amazwibela ukuze bangeze ngokuchofoza inkinobho. Ngaleyo ndlela, akudingeki bachithe isikhathi ukufuna imibhalo ye-API noma ukufuna ikhodi yesampula kumasayithi afana ne-StackOverflow.
Inethiwekhi ye-neural ku-GitHub Copilot iqeqeshelwe ukusebenzisa inani elikhulu lemininingwane, elenziwe ngekhodi - izigidi zemigqa elayishwe ngabasebenzisi abayizigidi ezingama-65 beGitHub, ipulatifomu enkulu kunazo zonke emhlabeni yabathuthukisi bokusebenzisana nokwabelana ngomsebenzi wabo.
Umgomo ukuthi uCopilot afunde ngokwanele mayelana namaphethini ekhodi ukuze akwazi ukuzigenca yedwa. Ungathatha ikhodi engaphelele kumlingani womuntu bese uqedela umsebenzi ngokungeza izingxenye ezingekho. Ezimweni eziningi, kubonakala kuyimpumelelo ekwenzeni lokhu. IGitHub ihlela ukuthengisa ukufinyelela kuthuluzi kubathuthukisi.
Njengamathuluzi amaningi obuhlakani bokuzenzela, IGitHub nayo ifuna iCopilot ihlakaniphe ngokuhamba kwesikhathi ngokuya ngemininingwane eyiqoqayo wabasebenzisi.
Lapho abasebenzisi bamukela noma benqaba iziphakamiso zikaCopilot, imodeli yayo yokufunda ngomshini izosebenzisa leyo mpendulo ukuthuthukisa iziphakamiso zesikhathi esizayo, ngakho-ke ithuluzi lingaba ngumuntu njengoba lifunda.
Kungekudala ngemuva kokwethulwa kweCopilot, abanye onjiniyela baqala ukwethuka ngokusetshenziswa kwekhodi yomphakathi ukuqeqesha ubuhlakani bokufakelwa bethuluzi. Okunye okukhathazayo ukuthi Uma iCopilot ikhiqiza izingxenye ezinkulu ngokwanele zekhodi ekhona, kungaba ukuphulwa kwe-copyright noma uqoqe ikhodi yomthombo ovulekile ukuze uyisebenzisele ukuthengisa ngaphandle kwelayisense efanele.
Mayelana nakho iFree Software Foundation isimemezele ukuthi yethule ucingo uxhaswe ngemali ukucela imibiko yezobuchwepheshe ngemiphumela yeCopilot yomphakathi wama-software wamahhala
“Sesiyazi ukuthi iCopilot njengoba injalo ayamukeleki futhi ayinabulungiswa, ngokubuka kwethu. Kudinga ukuqhuba isoftware engakhokhelwa (i-Visual Studio noma izingxenye zeVisual Studio Code) kanti iCopilot iyinsizakalo njengokungena esikhundleni kwesoftware.
Isizathu ukuthi iCopilot idinga isoftware engasebenzi, njenge-Visual Studio IDE yakwaMicrosoft noma umshicileli weVisual Studio Code, egcina i-FSF, futhi enza "insiza njengengxenye yesoftware," okusho ukuthi iyindlela yokuthola amandla phezu kwekhompyutha yabanye abantu.
Kusukela kanjalo ICopilot isandiso se-Visual Studio Code esisebenzisa ukufunda komshini baqeqeshwe kwisoftware yomthombo ovulekile ovunyelwe ngokukhululekile ukuphakamisa imigqa yekhodi noma izici konjiniyela njengoba bebhala isoftware.
Kodwa-ke, uCopilot uphakamisa eminye imibuzo eminingi edinga ukucatshangelwa ngokuqhubekayo.
“IFree Software Foundation isithole imibuzo eminingi mayelana nesimo sethu kulezi zinkinga. Siyabona ukuthi ukusebenzisa kweCopilot isoftware yomthombo ovulekile kunemithelela eminingi engxenyeni enkulu yomphakathi wesoftware yamahhala. Abathuthukisi bafuna ukwazi ukuthi ukuqeqesha inethiwekhi ye-neural kwisoftware yabo kungabhekwa njengokusebenzisa okufanele. Abanye abantu abangahle babe nentshisekelo yokusebenzisa iCopilot bayazibuza ukuthi iziqeshana zekhodi nokunye okukopishwe emakhosombeni abanjwe ku-GitHub kungahle kwephule umthetho we-copyright.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-FSF ithi "ayamukeleki futhi ayifaneleki" futhi izokhokhela izindatshana ezindabeni zezomthetho nezingqinamba
I-Gixy, Pandora, Pire, Porto ne-Rep: Yandex Open Source - Ingxenye 2